कलाकार भीमको ‘कर्म’ लकडाउनको उपहार ! | चितवन पोष्ट दैनिक
भरतपुर । लकडाउन (बन्दाबन्दी)को समयलाई रचनात्मक काममा लगाउँदै छन् कलाकार भीमप्रसाद शर्मा । हुन त ‘क्रियसन’ उनको ‘प्यासन’ नै हो । कलामार्फत रचनात्मकता पस्किन्छन् उनी । उनीद्वारा सिर्जित कलाको पारख गर्न पारखीहरु नै लालायित हुने गर्छन् ।
यतिबेला उनलाई ‘कर्म’ले छोएको छ । ‘कर्म’ शीर्षक दिएर लकडाउनको समय सदुपयोगमा लागेका छन् उनी । चित्रमा एउटा पात्रको काम देखाउनु ‘कर्म’ हो । भन्छन्, हरेक कुरा कर्मसँग जोडिएको छ, ‘कर्म’ नै मानवजातिको एउटा जीवनशैली हो । त्यसैले ‘कर्म’ले मन छोयो, अनि लागेँ कलाकर्मतिर । केही चिजले मन छोए त्यसैमा डुब्ने उनको बानी अनुकरणयोग्य छ ।
कहिले पर्यावरण, कहिले विभिन्न प्रजातिका चरा, चरामा पनि ‘गौँथली’ । मानब सभ्यतासँगै ज्यादै सामिप्यमा रहेको गौँथली उनको नजरमा प¥यो । केही समय पहिले उनी आफ्नो पुरानो थलो बाग्लुङ जाँदा रित्तो घर गौँथलीले कुरेको देखे । मालिकले घर नै छोडेर जाँदा पनि त्यो चरोले घर कुरी बस्नु उनको मस्तिकमा पर्छ र कोर्छन् ढोकाको भोटेतालामा निरस बसेको गौँथली । त्यसको शीर्षक बन्छ ‘सम्बन्धन’ । यो शीर्षकमा धेरै गौँथलीहरु कोरिए ।
गएको सकिँदो पुसमा यस्तै यस्तै चित्र समेटेर उनले काठमाडौँको एउटा ग्यालेरीमा एकल प्रदर्शन गरे । उ्रनको यो प्रदर्शनी दशौँ हो । यसका अलाबा उनले विदेशमा समेत एकल प्रदर्शनी गरिसकेका छन् भने विभिन्न कार्यशालामा भाग पनि लिइसकेका छन् ।
वरिष्ठ साहित्यकार एवम् पुराना कलाकार गोविन्दराज विनोदीको आँखामा कलाकार भीममा मौलिक जीवनप्रतिको मोह रहेको बताउँछन् । विनोदीकै भनाइमा मानवजीवनको सहसम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्ने सन्देश भीमका चित्रहरुले दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘गाउँतिरको सरल, शान्त, प्राकृतिक जीवनतर्फको आकर्षण र भौतिक सुखको खोजीमा अर्थहीन भागदौडप्रतिको विकर्षण उनका चित्रका अन्तरर्वस्तु हुन् ।’
कलाकार भीमका कलाशैलीलाई कलाकार तथा कला समीक्षक मुकेश मल्ल भन्छन्, ‘उनको कला हेर्दा सिल्पमा अगाध धनी, प्रवल सम्वेदनशीलता, निरन्तरतामा अनुशासनबद्ध, सटिक विषयवस्तु र प्रस्तुतीमा नौलोपन नै उनको मौलिक गुण देखिन्छ ।’ फरक संयोजन, विल्कुलै अलग्गै र रुपहरुको संगठन, थरिथरिका पात्रहरु देखिनु नै कलाकार भीमको कलामा अलग विशेषता रहेको कलाकार मल्लको ठम्याइ छ ।
व्यावसायिक कलाकारहरु कला सिर्जना गर्नु नै व्यापारको लागि हो भन्ने मान्यता राख्छन् तर, कलाकार भीमलाई पछिल्लो चरणमा कला सिर्जनाको व्यापारसँग त्यति मोह भएको पाइँदैन । भन्छन्, ‘कलाकारको काम कर्म गर्नु हो, कर्म गर्दै जाऊ बस ! विख्यात कलाकारका सिर्जना संकलन गर्नुमा उनलाई अझै आनन्द छ । १६औँ शताव्दीमा विदेशी कलाकारले बनाएका केही सिर्जना संकलन गरेका उनले कुनै उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् ।
चालीसको दशकसँगै शिक्षण पेसा छाडी कलाकारिताको यात्रा तय गरेका कलाकार भीम कलालाई व्यापक बनाउनुपर्छ भन्छन् । सिक्दै गरेकालाई थप ऊर्जा भर्ने काम उनले गैँडाकोटमा खोलेको कलावती आर्ट ग्यालेरीबाट हुने गरेको छ । यसलाई उनले सन्तुष्टिको विषय बनाएका छन् ।